Adora & etc.: June 2012
Celebrating the Curves
စနေနေ့ အလုပ်နားရက်မို့လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဖက်ရှင် website တွေ သွားကြည့်ရင်း တွေ့မိတဲ့ ဖက်ရှင် trend နဲ့ tips တွေမျှချင်လို့ စာရေးဖြစ်တာပါ။ ဒီနေ့ အများဆုံး ကြည့်ဖြစ်တာ plus-sized ဖက်ရှင်ပါ။ Size 12 နှင့်အထက် အမျိုးသမီးများကို plus-size လို့ခေါ်ပြီး၊ ဖက်ရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ size 12-24 ကို plus-sized လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့...ဒါယေဘူယျပြောတာပါ။ အမှတ်မှား နေရင်လဲပြောကြပါအုံးနော်။
Adora တို့မိန်းခလေးတိုင်း ကိုယ့်ဘာကို အဝတ်အစား ဝတ်လို့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ နေ့တွေ မကြာခဏ ဆိုသလိုရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းငယ် တက်လာလို့အဝတ်အစား ဝတ်တာအဆင်မပြေတာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အဝတ်အစား အတွဲအစပ် ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ အရင်တပတ်က ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်ကို ဒီတပတ်ပြန်ဝတ်ရင်တောင် စိတ်တိုင်းကြချင်မှကျတာမျိုးပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးကို Adora ဖတ်ဖူးတဲ့ မြန်မာဖက်ရှင် စာအုပ်ထဲမှာ "ဝသောနေ့များ" လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် မတင်မိုးလွင်ရေးတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ကဲ.. ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း လေးတွေ "ဝသောနေ့များ" အတွက် အဆင်ပြေ မပြေ ကြည့်ကြပါအုံးနော်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့က အခုခေတ်စားနေတဲ့ အရောင်တောက်တောက် Jean လေးတွေပါ။ ပုံမှန်ဝတ်နေကြ နက်ပြာ၊မိုးပြာ၊အနက်တွေ မဟုတ်ဘဲ candy-colored Jean လို့ခေါ်ကြတဲ့ အနီ၊အစိမ်း၊အပြာ၊ပန်းရောင်၊အဝါ အစုံပါပဲ။ အရောင်တောက်တောက်လေးတွေက ကြည့်တဲ့သူရဲ့မျက်လုံးကို ကိုယ်မကြည့်စေချင်တဲ့ အပေါ်ပိုင်းကနေ အရောင်လေးတွေရှိတဲ့နေရာကို ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးပိန်ချင်ရင်တော့ t-shirt/blouse အရောင်အရင့် လေးနဲ့တွဲဝတ်ရင်အတော်ပါပဲ။
ဒုတိယကတော့ color block လို့ခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းပါ။ Color block ဆိုတာ ပြောင်အရောင်တွေကိုစပ်ထားတဲ့ ဂါဝန်၊စကတ် တွေကိုခေါ်ပါတယ်။အခြေခံအရောင်တွေဖြစ်တဲ့ အဖြူ၊အနက်၊အသားရောင် ကိုစပ်ထားတာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အရောင်တွေစပ်ထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အရောင်လေးတွေပိုခေတ်စားတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အသားတွေပိုနေတယ်လို့ထင် ရတဲ့နေရာတွေမှာ အရောင်အရင့်လေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုလှတာပေါ့။
နောက်တနည်းက Adora အသုံးအများဆုံးနည်းပါ။ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားအပေါ်ကနေ ပုံကြတဲ့ Jacket/Blazer/Cardigan တခုခုထပ်ဝတ်လိုက်ရင် လက်မောင်းတွေ၊ ခါးတွေကာပြီးသား ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီမှာလဲအပေါ်ထပ်က အနက်ရောင်ပဲဖြစ်စရာမလို ပါဘူး။ အထဲက အဝတ်အစားက ထူထူထဲထဲကြီးဖြစ်မနေဖို့တော့လိုပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုဝတ်လဲ ကြည့်ပါအုံးနော်။
အခုပြောမဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က Topshop ကနေစတွေ့ပါတယ်။ T-shirt/Blouse ပုံစံကို အရှေ့တိုပြီး အနောက်ကရှည်တဲ့ ပုံမျိုးပါ။ ခြေထောက်အထက်ပိုင်း ပေါင်ကိုဖုံးချင်တယ်ဆိုရင် စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ Cropped Skinny Jean ဒါမှမဟုတ် Legging လေးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
Pencil စကတ်ကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်တုံးက ရုံးဝတ်ဖို့ စကတ်ဆိုရင် အနက်၊အညို၊နဲ့အသားရောင်တွေဖြစ်တာများပြီး၊ ပြောင်အရောင်တွေပါပဲ။ အခု Pencil စကတ်တွေက အရောင်စုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံ နဲ့အတိုအရှည် အစုံရှိပါတယ်။ ၉နာရီ-၅နာရီ ရုံးသမားတွေကြိုက်မှာပါ။ အရမ်းချာင်နေတာမျိုး၊ အရမ်းကျပ်တာမျိုးတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
Print တွေကလဲ အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပိန်စေပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မိန်းခလေးတွေ ဝစေတယ်ဆိုပြီး ရှောင်ကြတဲ့ ကန့်လန့်စင်း နဲ့အ ဖြူရောင်ပါ။ Adora ကတော့ အဲဒီ ဖက်ရှင် Rule ကိုသဘောမတူပါဘူး။ အစင်းတွေကဝတ်တက်ရင်လှသလို စွဲစောင်မှုလဲရှိစေပါတယ်။
ဒီပထမဆုံးပုံမှာ ကန့်လန့်စင်း အပေါ်ထပ်လေးကို ပြောင်လေးနဲ့တွဲဝတ်ထားတာပါ။"Breaking the lines" လို့ခေါ်ပါတယ်။ တကိုယ်လုံးကို အစင်းတွေဝတ်လို့ ဝနေသလိုထင်ရမှာစိုးရင် ဒီလိုဝတ်ပုံမျိုးက ကူညီပါလိမ့်မယ်။
နောက်တခုက Over Size Sweater ကို Legging/ Jean အကျပ်နဲ့ဝတ်တာပါ။ ဆွဲကြိုးအရှည်လေးဆွဲရင် V-shaped ပုံစံ လည်ပင်းမျိုးဖြစ်စေပြီး မဝတော့ပါဘူး။
နောက်တခုကအဖြူပါ။ Adora ကအဖြူရောင်ကို မဝတ်ဘဲမနေနိုင်ပါဘူး။ ဝသောနေ့များမှာတော့ Shirt ပုံစံဂါဝန်ကို ခါးပတ်လေးလေးနဲ့ဝတ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ဒေါက်ဖိနပ် လှလှလေးတွေနဲ့ Accessories လှလှလေးတွေက ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားကို ပျင်းစရာမကောင်းဘဲ စွဲဆောင်မှုပိုပြီး ရှိစေပါတယ်။ကြည့်၊ကြည့်ပါအုံး။
အပေါ်ကပြထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေထက်ပိုပြီး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နဲ့ သွယ်လျှချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးက မြန်မာဝတ်စုံပါပဲ။ ကိုယ်အလေးချိန် လုံးဝကျစရာမလိုဘဲလှစေတာပါ။ ကိုယ်တွေ့ပါနော်။
"ဝသောနေ့များ" အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိရင်လဲ Comment Box မှာမျှသွားပါအုံးနော်။
မှတ်ချက်။ ပုံတွေကို ASOS Online shop နဲ့ Google ကနေယူပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 22:25 No comments:
Singapore က deal တွေအကြောင်း
ခုတလော Sg မှာ deal တွေ တော်တော် ခေတ်စားလာပါတယ်..Groupon, Outlet, Deal, Shiokdeal အများကြီးပါပဲ..dealဆိုတာ internet website ကနေကုန်ပစ္စည်း တွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းတာပါ.. ခရီးသွား ဟိုတယ် တွေ၊လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ဟိုတယ် တွဲထားတာတွေ.. အလှအပနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်း တွေ..facial နဲ့massage စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ပြီးတော့ မီးဖိုချောင်သုံး ဒယ်အိုး၊ သစ်သီးဖျော်စက်၊ ပုဇွန်အခွံခွါတဲ့စက်၊ ကြက်ဥပြုပ်တဲ့စက် အစုံရှိပါတယ်.. တခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်း တွေစတဲ့ ကွန်ပြူတာ Hard disk, thump drive တွေ, အိမ်အလှစင်ပစ္စည်း တွေလဲ ရနိုင်ပါတယ်..
Dealတွေကို အဓိကစိတ်ဝင်စားစေတာ ဈေးအဆမတန်ချိုလွန်းလို့ပါ..သာမန်အချိန်မှာ ၁၀၀ကျော် ၂၀၀ ပေးရတဲ့ facial တို့, massage တို့ကို ၃၀၊၄၀ ဈေး , တခါတလေ ၁၈ကျပ် ၂၀ဈေးနဲ့ရောင်းတော့ စိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့ ..ကိုယ်လဲဝယ်သုံးပါတယ်..voucher နဲ့ခရီးလဲထွက်ဘူးတယ် အဆင်ပြေတာများတယ် ဝယ်တုံးက voucher ထဲမှာရေးထားတဲ့ အတိုင်း အကုန်ရပါတယ်... အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်း အရာက ဝယ်ထားတဲ့ service လေးတခုကြောင့် စိတ်အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပါ.
ဒီအကြောင်းကိုရေးတာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရော၊ ဈေးလျှော့ပေးတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့company တွေကို အပြစ်ပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်လိုမဖြစ်အောင် မဝယ်ခင်မှာသေသေချာချာ ဖုန်းဆက်ပီး သေချာမှ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ညီမှဝယ်ကြဖို့ သတိပေးချင်တာပါ.. ဒါကြောင့်ဒီမှာ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုက ဝယ်တယ်ဆိုတာရော ဘယ်ဆိုင်မှာလဲဆိုတာရော ဖော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး.
လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကို ချိန်းထားတဲ့ အချိန် မနက်ပိုင်းရောက်သွားပါတယ် ကောင်တာက အမျိုးသမီးက ဆိုင်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ အခန်းလေးမှာခဏထိုင်ခိုင်းပြီး စောင့်ခိုင်းပါလေရော..အဲလို အခန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းရင်ကြောက်ရပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆိုင်ကအရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဝန်ထမ်းက လာပြီးသူတို့product တွေရောင်းအတင်းရောင်းတတ်လို့ပါ.
စကားကြုံလို့ပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်:ငယ်က လက်သည်းခြေသည်းသွားပြင်တာ ပိုက်ဆံပေးခါနီးမှာ အဲလိုပဲအခန်းထဲထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတယောက်လာစကားပြောပါတယ်.. လာရောင်းတယ်ဆိုပိုမှန်မှာပါ.. ဈေးကလဲမနဲပါဘူး... အတိအကျမမှတ်မိပေမဲ့ ၁၀ခါစာကို ဒေါ်လာ၆၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်.. ရောင်းတာက Dr Foot Pro ဆိုတဲ့ service ပါ..သူ့အပြောအရ ဖိနပ်အမြင့်စီးတဲ့သူတွေက ခြေဖဝါးမှာအသားမာတက်တဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ဆိုင်က serviceက အသားမာဖြစ်တာကာကွယ်ပြီး ခြေထောက်ကို နုညံ့လာစေမဲ့အကြောင်း ပြောပြီးအတင်းရောင်းပါတယ်..လက်သည်းခြေသည်းသွားပြင်တာ ပုံမှန်ဆို ဈေးပေါပါတယ် Dr Foot Pro ဆိုတာကြောင့်ဈေးကြီးတာပါ "စဉ်းစားပါရစေအုံး လောလောဆယ်ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိလို့ပါ" ဆိုတာမရပါဘူး.. အဲဒီအခန်းထဲမှာ ၄၅မိနစ်လောက်ကြာပါတယ်.. ကြာလာတော့တခြားဝန်ထမ်းတယောက် က "ဘယ်လိုလဲ" ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ မေးငေါ့ပြီးမေးပါတယ်... ကိုယ့်ကိုရောင်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးက "မဝယ်ဘူး" ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မျက်နှာကိုမဲ့ပြီးလက်ခါပြပါတယ်... အားလုံး customer ရှေ့မှာလုပ်နေတာပါ... ပြီးတော့မှပိုက်ဆံ ပေးရှင်းပါတော့တယ်... ဒါကြောင့်ပြောတာ အခန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းရင် ကြောက်တယ်လို့. :)
Voucher အကြောင်းဆက်ပြောပြပါ့မယ်.. ဝယ်ထားတာ IPL Hair Remover UpperLip and UnderArm Treatment ပါ.. IPL ဆိုတာ Intense Pulsed Light ရဲ့အတိုကောက်ပါ. Laser Hair removal နဲ့မတူပါဘူး ..Radiation Risk မရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်...အလုပ်လုပ်ပုံအကြမ်းဖျင်းကတော့ အမြစ်ကို အပူပေးပြီးသတ်တာပါ..မှန်မှန်လုပ်ပေးရင် ထပ်မထွက်တော့ပါဘူး..အခန်းထဲမှာထိုင်စောင့်ရင်း ခဏကြာတော့ ဝန်ထမ်းတယောက်လာပြီး IPL အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်.. ပြီးတော့ voucher ကိုကြည့်ပြီး "ဒီ voucher က တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေ အတွက်မသင့်တော်ဘူး" ဆိုတာကစပြီး whitening treatment ထပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံး ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတော့တယ်.. တကယ်လို့ မဝယ်ပဲဒီအတိုင်းလုပ်ရင် ကအသားကိုလောင်ပါလောင်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းလဲပြောပါတယ် ... ဝယ်ခိုင်းတဲ့ဟာကလဲ ဈေးကြီးပါတယ်... နောက်ထပ် ထပ်ပေးရမဲ့ ပိုက်ဆံက ၇၀၀ ၈၀၀လောက်ရှိပါတယ် ..အဲလိုမတတ်နိုင်လို့ discount ဝယ်ပါတယ်ဆိုမှ...ကိုယ်က "မဝယ်ခင် terms and conditions ကိုသေသေချာချာ ဖတ်ထားတဲ့ အကြောင်း" "အခုပြောတာတွေ ဘာမှရေးမထားတဲ့ အကြောင်း" ပြန်ရှင်းပြတော့ ဒါတွေကဆိုင်ရဲ့ terms and conditions ဖြစ်တဲ့အတွက် ထဲမှာမပါတာဖြစ်မယ်လို့မရေမရာပြန်ပြောပါတယ်... ဒီထပ်ပိုဆိုးတာကတော့ "Indian တွေဆိုဒါလုပ်လို့မရဘူး၊ သူတို့အသားအရေ ကညိုတဲ့အတွက် IPL လုပ်တဲ့စက်က အသားအရေကိုလောင်လိမ့်မယ်" လို့ပြောတာပါ.. သူက whitening treatmentကို ဝယ်စေချင်လို့ ပိုပိုသာသာလေးပြောတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ကိုယ်က "ဒါလဲ T&C ထဲမှာမပါပါဘူး။ တကယ်လို့များ အမျိုးသမီးတယောက်ကမသိဘဲဝယ်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ" မေးတော့မဖြေပါဘူး...
စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှဆက်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတာနဲ့" ပြန်ပေးပါ မလုပ်တော့ပါဘူး" လို့တောင်းတော့ ၅ခေါက်အရင်လုပ်ပါ ဒါဆိုတဝက်စာပဲပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောပါသေးတယ်... ခုနကကြတော့ Full Treatment မလုပ်ရင် အသားလောင်မယ်ဆိုပြီး ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့မှ တဝက်လုပ်ပါဖြစ်ပြန်ပါတယ်..ထားပါတော့ ဝယ်ထားတဲ့ voucher ကပိုက်ဆံပြန်ရမရ မသေချာပေမဲ့ ရအောင်ကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်... ကံကောင်းထောင့်မစွာပဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ website ကို email ပို့လိုက်တာ ၁ပတ်နေတော့ ပိုက်ဆံပြန်ရပါတယ်..
ဒီမှာ အဓိကပြောချင်တာက ပိုက်ဆံပြန်ရတာ မရတာမဟုတ်ပါဘူး.. ကုန်သွားတဲ့အချိန်ရယ်၊ အတွေ့အကြုံရယ်က စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်...အလိမ်ခံရတယ်လို့လဲခံစားရပါတယ်.. နောက်ဆုံးတော့မဝယ်ခင်ဖုန်းလေးဘာ
လေးဆက်ပြီး သေသေချာချာ မမေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ အပြစ်တင်ရပါတော့မယ်
တူတူနေတဲ့သူငယ်ချင်းကတော့ အားပေးပါတယ် "နင်ဖုန်းဆက်မေးလဲပြောချင်မှပြောမှာပေါ့" တဲ့ ...ဒါလဲဖြစ်နိုင်တာပဲနော်
Posted by Adora etc. at 09:30 No comments:
Bershka က အဝတ်ဆိုင် တခုရဲ့နာမည်ပါ. စပိန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဖက်ရှင် အဖွဲ့အစည်း Spanish Inditex ကပိုင်ပါတယ်. တခြားနာမည်ကြီး အဝတ်အစား တံစိတ်တွေ ဖြစ် တဲ့ Zara နဲ့ Pull and Bear တို့ကိုလဲ အဲဒီအဖွဲ့ကပဲ ပိုင်ပါတယ်. အခုပြောချင်တာ ဒီတလောတွေ့ပြီး ကြိုက်မိတဲ့ Bershka က new collection တွေပါ..
အလံတွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ထား တာကိုကြိုက် တယ်ဆိုရင် ကိုယ်အရမ်းသဘောကြနေတဲ့ လန်ဒန်အလံ ဒီဇိုင်း အဝတ်အထည် တွေကိုမျှချင်ပါတယ်.
ပြီးခဲ့တဲ့ ပိတ်ရက်က ဒီကဆိုင်ကိုသွားကြည့် တာ စကတ်ပဲတွေ့လို့ စကတ်ပဲဝယ်လာပါတယ်။သေသေချာချာ မရှာတာလဲပါတာပေါ့။ဈေးလဲ မကြီးပါဘူး.. စကတ်ကို ၁၇ ဒေါ်လာပဲပေးရပါတယ်....စပိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေါမလဲမသိဘူး..စကတ်ကဝတ်ကြည့်တော့ model ဝတ်ထားသလောက်မတိုပါဘူး..model ရဲ့အရပ်ကတော့ သာမန်လူတွေထက်တော့ရှည်မှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား..;)
နောက်ထပ်ကြိုက်တာက Ibiza summer nights လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ထဲကပါ အဖြူရောင်ရိုးရိုး လက်ပြတ်မှာ pattern ဒီဇိုင်းလေး..Choker လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲကြိုး ငွေရောင်နဲ့လှတယ်နော်..
Ibiza ဆိုတာ Google မှာရှာကြည့်ရင် စပိန်ရဲ့ နာမည်ကြီး ပင်လယ်ကမ်းခြေလို့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် Ibiza ရဲ့နွေဦးရာသီက မေ ကနေ အောက်တိုဘာ တဲ့..Ibiza-spotlight.com မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်
"Yes, summer is for partying, spending warm evenings under star-filled skies, swimming in the crystal clear sea and living life on the beach. Then in November Ibiza throws off its hedonistic image and settles down to more peaceful times."
ပန်းကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက် Flowers Lovers collection က Legging ပါ .အဲဒါလဲဆိုင်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူး ဈေးမကြီးရင်တော့လိုချင်တဲ့ အထဲမှာပါ ပါတယ်..
နောက်ဆုံး ဂါဝန်လေးက ခုခေတ်စား နေတဲ့ အရောင်တောက်တောက်လေးပါ အနီရောင်ဂါဝန်လေးကို Jean Jacket လေးနဲ့nude accessories တွေနဲ့တွဲဝတ်တာတော်တော် သဘောကြပါတယ်.. ဒါလဲကိုယ်မပိုင်ပါဘူး..:D
ပုံတွေအားလုံးကို Facebook က Bershka Page ကနေယူပါတယ် နောက်တခေါက်ကြိုက်တာတွေ တွေ့ရင်ရေးပါအုံးမယ်..
Posted by Adora etc. at 07:55 No comments:
“The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.” (Lee Lacocca)
Picture credit to lonelyplanet.com
Posted by Adora etc. at 02:07 No comments:
Labels: the Primero
စနေနေ့ အလုပ်နားရက်မို့လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဖက်ရှင် website တွေ သွားကြည့်ရင်း တွေ့မိတဲ့ ဖက်ရှင် trend နဲ့ tips တွေမျှချင်လို့ စာရေးဖြစ်တာပါ။ ...
ဒီနေ့တော့ဘာရယ်မဟုတ် ပစ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်blog လေးဘက်ခြေဦးလှည့်ရင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ blogger တွေထဲဝင်မွှေနှောက်မိတယ်။ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ နော...